RCPCH statement on Myanmar | RCPCH
This page was updated on 26 April 2021. It was first published on 19 February 2021, withaBurmese translation added on 22 February.
We urge the junta to respect all international humanitarian norms and laws relating to the rights of children and families, including promotion of medical services and public health and protection of health workers and facilities from violence, interference and harm.1,2
Myanmar’s paediatric doctors and nurses, alongside all other clinical practitioners, researchers, teachers and academics, provide critical life-saving care for thousands of children and families every day. They work long hours, often in extremely challenging conditions. Their dedication to the Myanmar people and country is unimpeachable and stands asacredit to professional paediatrics around the world.
RCPCH has worked in close partnership with the Myanmar Paediatric Society for many years – buildingaunique and special relationship founded in mutual respect and trust. Our joint programme of work covers research, professional standards and examination, and development of innovative approaches to teaching, training and quality improvement. All our work is devoted to supporting local paediatricians and other health workers to provide high-quality clinical care to unwell infants and children. One hundred and fifty Myanmar doctors are members and fellows of the RCPCH – each of them makingavaluable contribution to child health globally, in Myanmar and the United Kingdom.
RCPCH stands in solidarity with our members, colleagues and friends in Myanmar. We ask all parties to ensure that they are able to continue their vital work without fear or intimidation. We echo our strategic partner UNICEF’s urgent appeal to all parties to recall their obligations to uphold children’s rights as enshrined in the Convention on the Rights of the Child (CRC), to which Myanmar isasignatory, and under the Myanmar Child Rights Law of July 2019.3,4
 Resolution 2286 (2016) / (un.org)
 Microsoft Word - ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေ.docx (myanmar-law-library.org)
ဗြိတိန်အခြေစိုက် ကလေးအထူးကုသမားတော်နှင့် ကလေးကျန်းမာရေးပညာဆိုင်ရာ တော်၀င်တက္ကသိုလ်၏ ကြေညာစာတမ်း
ဖေဖော်၀ါရီလ ၁၉ရက်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်
ဗြိတိန်ိနုင်ငံရှိ ကလေးအထူးကုသမားတော် နှင့် ကလေးကျန်းမာရေးပညာဆိုင်ရာ တော်၀င် တက္ကသိုလ် RCPCH သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိရင်ဆိုင် နေရသော ပြဿနာ အရပ်ရပ် နှင့် ပတ်သက်၍ အထူး ၀မ်းနည်းကျေကွဲ စိတ်မချမ်းမြေ့စွာဖြင့် အလွန်အမင်း စိုးရိမ် ပူပန်မိပါသည်။
RCPCH သည် လက်ရှိအာဏာ အတင်းအဓမ္မ သိမ်းယူထားသော မြန်မာစစ်ကောင်စီ ကို ကလေးသူငယ်များ အပါအ၀င် ပြည်သူလူထုအပေါင်း၊ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းများ နှင့် ဆေးရုံဆေးခန်း များကို အကြမ်းဖက် နှောက်ယှက်ခြင်း၊ ထိခိုက်နာကျင်အောင် ပြုလုပ် ခြင်းများ ရှောင်ရှားပါရန်၊ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လူသားစံမှု ဥပဒေ ကျင့်၀တ်ကျင့်ထုံး စည်းမျဥ်း စည်းကမ်း များနှင့် အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး ပါရန် အထူးတိုက်တွန်းပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ကလေးအထူးကုသမားတော်များ၊ ဆရာ၀န်များအားလုံး၊ သူနာပြုများ၊ ကျန်းမာရေး၀န်ဆောင်၀န်ထမ်းများ၊ ဆေးပညာသုတေသနပညာရှင်များ၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များ၊ ဆေးပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်များသည် နေ့တဓူ၀ ဖြေရှင်းရန် ခက်ခဲသော ပြဿနာများ ကို အံတု၍ လူအသက်ပေါင်း များစွာကို ကယ်တင်ပြီး ပြည်သူအများ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများကို နေ့ရောညပါ လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပါသည်။
၄င်းတို့၏ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ထားရှိသော သစ္စာနှင့် ပြည်သူများအပေါ် ထားရှိသော မေတ္တာ စေတနာ ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ထောက်ခံပါသည်။
မြန်မာ့ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းများအားလုံး၏ မေတ္တာ စေတနာ ပညာ အရင်းခံသော လုပ်ရှားမှုသည် ကမ္ဘာတလွှား တွင်ရှိသော ကလေးအထူးကုသမားတော်များအတွက် စံနမူနာကောင်း ဖြစ်ပြီး အထူးပင် ဂုဏ်ယူ မော်ကွန်းတင်ပါသည်။
တော်၀င်တက္ကသိုလ် (RCPCH) သည် မြန်မာကလေးအထူးကုသမားတော် ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်း (MPS) နှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအ၀၀ကို အတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်မှာ ကာလများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီ။ သို့ပါ၍ ထိုအရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ရပ်သည် အပြန်အလှန် လေးစားမှု၊ ယုံကြည် စိတ်ချမှု၊ အပြည့်အ၀ ထောက်ခံမှု အထူးတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ် တို့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ဖွဲ့ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများမှာ
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံနှုန်းများ ထားရှိ ခြင်း
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ တိုးတက်ဆန်းသစ်သော လက်တွေ့ လေ့လာသင်ကြားရေး နည်းလမ်းသစ်များ ရှာဖွေခြင်း
တိုးတက် ခေတ်မီ ဆန်းသစ်သော နည်းများဖြင့် ကျန်းမာရေးပညာနှင့် လက်တွေ့ စောင့်ရှောက် မှု များ ကို အရည်အသွေး မြှင့်တင်ခြင်းတို့ ပါ၀င်ပါသည်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် နာမကျန်းဖြစ်သော ကလေးသူငယ်များကို အဆင့်မြင့် ကျန်းမာရေး စောင့် ရှောက်မှု ပေးရာတွင် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကလေးသမားတော် ၁၅၀ သည်လည်း တော်၀င်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင့် အထူးဘွဲ့ရ တော်၀င်တက္ကသိုလ် အဖွဲ့၀င်များ ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့ တစ်ဦးချင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသာမက ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ကလေးသူငယ်များ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများတွင်ပါ၀င် အကျိုးပြုနေသူများ ဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ တော်၀င်တက္ကသိုလ်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ တော်၀င် တက္ကသိုလ်အဖွဲ့၀င်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ မိတ်ဆွေများနှင့် အတူတကွ လက်တွဲ၍ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် တစ်စိတ်တစ်၀မ်းတည်း ရပ်တည်သွား မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုဖြစ်ပွားနေသော ပြဿနာအရပ်ရပ်၏ တာ၀န်ရှိ စစ်ကောင်စီနှင့် သက်ဆိုင်သူများ အားလုံးသည် မြန်မာပြည်ရှိ ကလေးသမားတော်များနှင့် တကွ ကျန်မာရေး၀န်ထမ်းများ စိတ်နှလုံး အေးချမ်းသာယာစွာ အန္တရာယ် ဘေးကင်းစွာ ခြိမ်းခြောက်မှု ကင်းသော လုပ်ငန်းခွင်တွင် ၄င်းတို့ ၏လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လုံး၀တာ၀န်ယူ စောင့်ရှောက်ပါဟု RCPCH တော်၀င် တက္ကသိုလ် မှ အလေးအနက် တောင်းဆိုပါသည်။
ထို့အပြင် တော်၀င်တက္ကသိုလ် RCPCH သည် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော UNICEF [ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများဆိုင်ရာ ပညာရေးနှင့် ရံပုံငွေအဖွဲ့] ၏ အောက်ဖေါ်ပြပါ တောင်းဆိုချက်ကိုလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ထောက်ခံပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ဂျူလိုင်လတွင် မြန်မာကလေးလူငယ်များဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးဥပဒေ ရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာညီလာခံ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လိုက်နာရန် ၀န်ခံကတိ ထိုးထားပြီးဖြစ်သော နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ သို့ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဥပဒေတွင်ပါရှိသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ညီလာခံတွင် သဘောတူလက်ခံ အသိအမှတ်ပြု တိကျစွာလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းစည်းမျဥ်းများကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာရန် လေးလေးနက်နက် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။